SomaliTalk.com » Sideen u Fahamnaa Qur’aanka? Q: 18aad
Suuradan waxaa loogu Magac daray Jumcaha maadama ay ka Hadasho Axkaam ku Saabsan Salaada Jumcaha, waxa ayna Muminiinta uga yeertaa in ay u Dagdagaan Gudashada salaada Jimcaha.
Suuradan waxay Xooga saartaa dhanka Sharciga, waxa ayna si gaar ah u Faahfaahisaa Sharciyada ku Saabsan Salaada Jimcaha Gudashadeeda taas ah waajib Muminiinta Saaran, waxaana Suuradan lagu Faray in ay Joojiyaan Beeca Salaadana u dagdagaan maalinta Jimcaha marka la Aadaamo Salaada Jimcaha..
Suuradaan waxaa loogu magic daray Al-Munaafiquun Maadama ay Dul ahaan ka Hadasho Xaaladaha Munaafiqiinta iyo Akhaalaaqdooda.
Kooxda labaadna waa Munaafiqiinta oo ah koox Asal ahaan ka mid ah Muslimiinta Laakiin Laabta Gaalo ka ah, taasoo macnaheedy yahay Ma rumesyna waxyaabihii ay aheyd Diin ahaan in loo Rumeeyo.
Suuradan waxaa loogu Magac daray At-Taghaabun, taasoo loola jeedo in ay imaan Dooto maalin Dadka aysan Fursad u Helin in ay Ziyaadsadaan wax Kheyra ayagoon Fileayn, Maalintaas kan Gaalka ah ma Helaayo Fursad uu Gaalnimada kaga Toowbad keeno, kan Muslimka ahna ma Helaayo Fursad uu Kheyrka ku Kordhisto.
Suuradan waxa ay ka Hadashaa Sharciyada , waxaase u Dheeraad ah ina ay Caqiidada usoo Gudbiso si la mid ah sida ay Suuradaha Mako usoo Gudbiyaan si la mid ah.
Suuradan waxaa loogu Magac daray Adh-Dhalaaq (Furiin), Maadama ay Suuradaan ka Hadashay Sharciyada ku Saabsan Noocyada Furiinka, Dhalaaqa Sida Waafaqsan, Dhalaaqa Biadciga ah.
Suuradan waxay ka Hadshaa Sharciyada Qoyka ku Saabsan, waxa ayna Faahfaahin ka bixisaa arimaha ku Saabsan Waqtiyada Furiinka Munaasafka yahay Hadiiba loo baahdo, Cidada ay Tirsaneyso tan la Furay, Masruufka iyo Deegaan ahaan Xaqa ay yeelan karto Naagta la Furay, iyo Sidoo kalana waxey Suuradan ka Hadashaa Sharcida Quseeya Nuujinta Caruurta i.w.m.
Suuradan waxaa loogu Magac daray At-Taxriim, maadama ay ka Hadho in Nabiga lagu yiri Maxaad isaga xarimeysaa waxa uusan Alle (Cw) kaa Xarimin.